Horyaalka Talyaaniga oo muddo 14 sanadood ah kaddib kusoo noqday kaalinta 1-aad | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Horyaalka Talyaaniga oo muddo 14 sanadood ah kaddib kusoo noqday kaalinta 1-aad
Horyaalka Talyaaniga oo muddo 14 sanadood ah kaddib kusoo noqday kaalinta 1-aad
(Roma) 21 Jan 2021 – Horyaalka Talyaaniga ee Serie A ayaa noqday horyaalkii ugu fiicnaa sanadkii hore ee 2020 sida uu qabo Xiriirka Caalamiga ah ee Taariikhda & Tirakoobka Ciyaaraha ee FFHS, isagoo ka hor maray EPL.
Waa markii ugu horreeysey ee muddo 14 sanadood ah uu Horyaalka Talyaanigu uu dunida 1-aad ka galo, iyagoo horay 10 jeer horay ugu guulaysey min 1991-2006-dii.
Sidoo kale kooxaha Talyaaniga ayaa 3 ku yeeshay 7-da naadi ee ugu sarreeya caalamka, taasoo Serie A siisay 1,026 dhibcood sanadkii tegey ee 2020-kii.
Horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa 2-aad ku galay 1,003 dhibcood, Brazil ayaa 3-aad ku jira isagoo helay 964, Spain 4-aad 954, halka Bundesliga uu 5-aad ku galay 864 dhibcood.
Previous articleSida uu cudurka Covid-19 uu u kashifay sida sida ay u liitaan nidaamyada Galbeedku
Next article”Dharkii ayay iga siibeen!” – Wiil Soomaali ah oo sheegay inay si xun u ”bahdileen” Booliiska Sweden